mahakasika ireo vehivavy Malagasy haondrana any Sina. 20 tapitrisa ariary avy no alain’ilay Sinoa
vavy amin’ireo Sinoa lahy ho tambin’ny fampanambadiana sy fanondranana vehivavy Malagasy, raha
ny famotoran’ny polisy ireo Sinoa lahy enina nikasa hitady vady sy ilay vehivavy sinoa iray mpisera.
Efa andiam-behivavy 20 isa no nadera tamin’izy enin-dahy ka ny telo tamin’izy ireo ihany no
nandrianin’ny fon’ny telo lahy. Ireo Sinoa telo lahy ambiny kosa tsy nisy afapo tamin’ireo 17 ambiny
ka niandry izay vehivavy adera manaraka. Tamin’ny volana desambra teo no nisoram-panambadiana
ireo vady amboarina telo ireo. Nahazo angom-baovao ny polisy io vehivavy Sinoa io mitady tovovavy
Malagasy io.Nidina teny Ivato ny mpitandro filaminana ny zoma teo ka tratra tao amin’ny hotely lehibe ireo Sinoa enin-dahy sy ireo vehivavy 3 efa novadiany ary ilay sinoa mpanera. Efa nikasa hiara-hanainga hisidina any Sina moa ireo telo lahy sy andriambavilanitrany Malagasy no tra-tehaky ny polisy. Hatreto tsy misy vevivavy Sinoa mitady lehilahy Malagasy. Ahiana ireo 17 tsy nosafidian’ny Sinoa no nialona ka nampandre ny manam-pahefana.